CFM : miisa 52 ny fangatahana famotsoran-keloka | NewsMada
CFM : miisa 52 ny fangatahana famotsoran-keloka
“Hatramin’izao, misy ireo olona nametraka antontan-taratasy tato amin’ny Filankevitry ny fampihavanana malagasy (FFM), ary mbola tsy vita ny famoahana didy eo amin’ny fitsarana tampony. Miisa 52 ireo antontan-taratasy, ary mbola any amin’izao fotoana izao.”
Izay ny fanazavan’ny filohan’ny Komitin’ny fampihavanana malagasy (CFM), Maka Alphonse, teny Ampefiloha, omaly, momba ny fangatahana famotsoran-keloka ao anatin’ny fampihavanam-pirenena.
Mifamadika ny andraikitra amin’ny lalàna vaovao momba ny fampihavanam-pirenena. Apetraka eny amin’ny CFM ny antontan-taratasy fangatahana famotsoran-keloka, alefa hojeren’ny vaomiera manokana mahaleo tena misahana ny famotsoran-keloka ao amin’ny fitsarana tampony izany.
Manome ny heviny ny eo anivon’ny fitsarana tampony amin’izany ary alefany any amin’ny CFM, izay manome na tsia ny famotsoran-keloka. Mbola tsy mijoro ny vaomiera manokana mahaleo tena misahana ny famotsoran-keloka eny anivon’ny fitsarana tampony. Izay no tsy mbola hisian’ny famotsoran-keloka amin’izao.
Tokony ho ao anatin’ny fahatoniana ny fifidianana
“Mino sy manantena izahay fa tsy hisy izany korontana amin’ny fifidianana izany”, hoy izy manoloana ny fanahiana ny mety hisian’ny korontana mialoha na mandritra na aorian’ny fifidianana. Miankina amin’ny tompondrakaitra sy ny mpanao politika ary ny olom-pirenena tsirairay izany. Asakasakan’izay hamboly korontana eto: hotsarain’ny tantara.
“Ho hitantsika eto izay olona hamboly korontana eto, ka hiteraka voka-dratsy ho an’ny firenena”, hoy ihany izy. Hiezaka hanao izay hifanatonana sy hifampiresahana ry zareo mba hisian’ny fifampidinihana eo amin’ny samy Malagasy, ny antoko politika, ny mpifaninana amin’ny fifidianana. “Mba ao anatin’ny fahatoniana no hiatrehantsika ny fifidianana”, hoy ny faniriany.